Solari oo kadib guushii ay ka gaareen kooxda Real Betis ka hadlay xidigaha Isco iyo Marcelo – Gool FM
(Real Madrid) 14 Jan 2019. Tababaraha kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa sheegay inuusan wax caqabad ah ku qabin ciyaaryahan kasta ee ku sugan Los Blancos.
Real Madrid ayaa guul 2-1 ah kaga gaartay kooxda Real Betis kulankooda 19-aad ay xalay ku wada ciyaareen horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Ugu horeyn Santiago Solari ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Marca” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay dhaawaca soo gaaray Benzema inta ciyaarta ay socotay wuxuuna yiri:
“Benzema wuxuu jab kasoo gaaray gacanta midig, waxaana go’aamin doonaa mudada uu garoomada ka maqnaan doono, kadib marka aan ogaano waxa uu dhakhtarka sheegi doono”.
“Waxaan u qalanay in aan guushan ka gaarno kooxda Real Betis, waxaan heysanay shaqsiyad xoogan, kubada cagta waxay leedahay waxyaabo u gaar ah, gaar ahaan marka uu ciyaaryahan gool ka dhaliyo kooxdiisii hore, balse markan inaga ayay faa’iido inoo ahayd maadaama uu Dani Ceballos gool ka dhaliyay Real Betis”.
“Waxaan kulan xoogan ku soo ciyaarnay garoon aad u adag, qof walba wuu ka war qabaa sida ay u adag tahay in lagu ciyaaro garoonka Benito, balse waxaan kala soo laabanay natiijo aad u wanaagsan”.
“Ma jirto cadaawad ama arimo kale shaqsiyadeed ee u dhexeysa aniga iyo ciyaartoyda gaar ahaan xidigaha Isco iyo Marcelo, dhamaanteen waxaanahay hal koox, waan ka xumahay inaan ku soo cel celino hadalkan”.
Guardiola oo fariin u diray De Bruyne, kadib falkii xumaa uu sameeyay inta lagu gudi jiray kulankii Burton